Howlgal lagu qabtay dhallinyaro badan oo laga sameeyay Degmada Wadajir | Sagal Radio Services
Howlgalladan oo billowday waabarigii hore ee saaka ayay ciidamada waxay ku baarayeen guryaha, iyagoo kasoo qabqabtay dhallinyaro, kuwaasoo lagu qaaday gadiid ay ciidamadu leeyihiin.
Sidoo kale, howlgalkan ayaa saameyn ku yeeshay suuqa weyn ee degmada Wadajir oo ka mid ah suuqyada ugu waa-weyn Muqdisho, inkastoo ay dib u furmeen howlgallaha ganacsiga suuqaas iyo guud ahaan degmada.
Mid ka mid ah dhallinyarada degmada Wadajir ayaa sheegay inuu arkayay ciidamada oo dadka ka qab-qabanayay waddooyinka, waxaana dadkii lagu qqabqabtayo la isugu geeyay xarumaha ciidamada si loo kala saaro.
Hay’adaha amniga dowladda ayaa howlgallo caadi ah ka sameeya Muqdisho, kaasoo inta badan lagu soo qab-qabto dhallinyaro lagu tuhmayo inay xiriir la leeyihiin Al-shabaab.
Dhawaan ayay ciidamada dowladda howlgallo ay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan Muqdisho kusoo qabqabteen dhallinyaro ay la xiriirinayaan inay ka tirsan yihiin Al-shabaab ama la shaqeeyaan, kuwaasoo ay sheegeen inay ku wadaan baaritaanno.
Tan iyo markii uu dhintay hoggaamiyihii Al-shabaab, dowladda Soomaaliya waxay xoogga saartay inay amniga guud ee Muqdisho xoojiyo, kaddib markii ay soo saartay wasaaradda amniga digniino ku aaddan inay Al-shabaab soo qaadi karto weerarro aargudasho ah.